Ngwa Nkwado sitere na Leaderpromos.com: Ahịa, Ọrụ & Ngwaahịa
Leaderpromos.com: Ngwa Nkwado Ukwuu, Nnukwu Ọrụ!
Wenezdee, Machị 9, 2011 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Dị ka m njem ka Webtrends Tinye 2011 ogbako a na-achọ, a nọ m na nche maka ụfọdụ ngwa ahịa nkwado iji kesaa na mmemme ahụ. Dị ka onye na-akwado ihe omume ahụ, otu n'ime nhọrọ ndị ahụ bụ ikesa ndị bịaranụ akwụkwọ ozi ọhụụ. Dị ka obere azụmahịa, n'ezie, nke a bụ ego m na-echegbu onwe ya.
Kedụ ka m ga - esi mezue mmefu ego siri ike, bụrụ onye nkwado dị mma nke mmemme ahụ, ma kesaa ụfọdụ nnukwu shwag ndị bịara ya ga - enwe ekele ma zaghachi? Achọtara m azịza m Leaderpromos.com. Mba, nke a bụ ọ bụghị akwụkwọ nkwado ma ọ bụ ga-enwe ihe ọ bụla Mgbakwunye njikọ… M nnọọ kwere na n'ihu ọha oké ọrụ na ngwaahịa mgbe e nyere ohere.
Ekpebiri m ịzụrụ ụfọdụ mpempe akwụkwọ foldover dị ukwuu nke bịara na mkpịsị akwụkwọ nke ga-enwe ozi kọntaktị anyị niile na ha. M nyere ha iwu, ngwa ngwa nweta ihe akaebe site na email, iwu ahụ mezuru ma zigara San Francisco n'ime ụbọchị ole na ole! Ebe ọ bụ na ahụbeghị m ngwaahịa ahụ, ụjọ tụrụ m banyere itinye ego na ya. Ndị na-eri bụ nnọọ ihe ezi uche dị na otú ahụ ka m na-eche na àgwà ga-abụ… ma ọ bụ ka njọ… ha agaghị eme ka ha na oge.
Nsonaazụ ahụ dị egwu!
Ka m gbagoro Onye isi ọrụ Alex Yoder na ihe omume, M zutere na a nnukwu mmakọ na a ekele maka jụụ notepads! Egwu !!! Achọtara m oche ma enweghị ike ịkọwa etu m si nwee obi ụtọ ịhụ ka ọtụtụ mmadụ na-atụtụ akwụkwọ ahụ, na-ejigide mkpịsị mkpịsị mkpịsị aka na-akwụ ụgwọ, wee buru ha na mmemme ahụ. Ha dị jụụ nke na m gwara Webtrends ka ha bugharịa ihe ndị ọzọ n'ụlọ ọrụ. Ha mere, anyị wee nweta ha taa. (Daalụ Webtrends!).
Ekele dịrị ndị na Leaderpromos.com. Akwụkwọ ozi ahụ pụtara nke ọma na m nyefere ha kama kaadị azụmaahịa maka ihe fọdụrụnụ nke ihe omume ahụ! (Ghara ikwu na enweghị m kaadị azụmaahịa n'ihi na onye ọzọ dị iche iche na-akpọghị aha na-egbu oge na ha !!!). Ọ bụrụ na ị kwụsị DK New Media, jide n'aka na jidere otu!
Ntughari, Ọdịnaya na Rock Operas
Mepee maka Azụmaahịa: ratelọ ọrụ ịde blọgụ
Nov 14, 2011 na 3:26 AM
Nọrọ Sourced, ndị na-akwado ngwaahịa na-ebugharị, ewepụtala ọtụtụ ngwaahịa na gburugburu ebe obibi nke na-egosipụta ụfọdụ ihe dị egwu na nke magburu onwe ya maka ihe eji emegharị. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-achọ echiche ahịa na-atọ ụtọ na nke ụkpụrụ omume, enwere ọtụtụ ihe ị ga: Ikekwe ngwa kachasị adọrọ mmasị na nchịkọta mmekọrịta ha na gburugburu ebe obibi bụ enweghị batrị, elekere na-enweghị mmiri nke na-akpali ụfọdụ mkparịta ụka na-atọ ụtọ n'etiti ndị otu ebe a. Maka ụyọkọ ọgụgụ isi, enwere nkọwa doro anya na-echegbu onwe maka otu nke a nwere ike isi rụọ ọrụ na ọ nweghị ihe anyị ga-achọ na ngalaba ọha. Ọ bụrụ na e nwere ndị ọkà mmụta sayensị, ndị ọkà mmụta sayensị ma ọ bụ ndị voodoo-ndị nọ n'ebe ahụ nwere ike ịmị ọkụ na nke a, biko kwuo okwu ma wepụ anyị na nhụsianya anyị.